वरिष्ठ कलाकार हरिवंश आचार्यको यस्तो सुझाव- ‘‘विदेशमा दुःख गरेर कमाएको पैसा एक टुक्रा जग्गामा खेर नफा, ल्नुहोस्’’ – Ap Nepal
September 29, 2021 882
सुरुमा आयआर्जन हुने क्षेत्रमा पैसा लगानी गर्नुपर्छ । अनि, पैसा कमाएर मात्र घर बनाउने, बाइक वा गाडी किन्ने, घरमा विलासिताका सामान जोड्दा उत्तम हुन्छ।-नेपालहोम्सबाट।
Prev७७ जनाको ज्यान जोगा, उने क्याप्टेन आङगेलु शेर्पासँग रहेकी यी महिला को-पाइ,लट को हुन् ? जसको कुनै च, र्चा भएन (भि, डियो सहित)
NextEDV परेर अमेरिका जाने तयारीमा रहेका ३ जना पक्राउ ! गरेका रहेछन् यस्तो गर्नै नहुनेकाम..
किन डराइन् हिना खान ? सिद्धार्थको अन्तिम संस्कारमा समेत जान सकिनन् यस्तो भनिन् हेर्नुस्
‘द भ्वाईस कि, ड्स’की टेरेसा बिश्वकर्मा र उनको आमाको पहिलो गीत आयो । केहि घ, ण्टामै लाखौंले हेरे भि, डियो (गीत हेर्नुस)